Oromo News 06.30.21 | KWIT
StateIowa har’a akka baasetti murtiin abbaa seera walii gala akka murteesetti program sex eduaction jalati akka birrii kafaluu dhaaban himan.
Abbaa seera Iowabara2019 keessati program ulfaa baasu kan barsiisu akka maallaqa qarqaarsa hin kennine murteese ture.
GovernorReynolds akka jetteti mariin kun gara warra gibirii nama kafalutti akka ulfaa baasu maallaqan hin qarqaarre ibsa kan itti ergan ta’a.
Karoorri maati akka jedhanitti murtiin mana seera kun ummata irrati setbach fayyaa isaani irrati akka tae himan.
Deparmantin mana fayyaa South Dakota akka himanitti dhukubni corona virus Deltavariant kan jedhamu akka SouthDakota keessati mullate himan. Variant kuni Iowa fi Nebraska keessati akka mullate jiru himan.
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasaniiti namni haarawa guyyaa har’a sababa Covid19due nama tokko yoo tau kan haarawa qabame ammoo 210 dha. Websitestate kan coronavirus akka mullisuti akka dhukubni kun jalqabe namni waliigala Iowa keesati due6,134 akka tae mullisa,WoodburyCounty keessati ammoo 230 dha.
Ajajaan Siouxland District Health halkan guyyaa boriiti Mardi Gras parade dura buaa akka tau himan. Qophiin kunis parki keessati sanbata kan jalqabuta’a. walitti qabaan akka jedheti dhiirri wayta dhukuba kanaa jabaachudhan waan hojattaa oolanif akka ayyaanefatanif filatamanii jiran jedhan .qophiin kunis kan jalqabi guyyaa boruu magaala SiouxCity downtown tti seati 6 p.m irraa akka tae himan.